China Haining yanguan mutaundi epakutanga zvakadaro kwenguva refu kuti kambani! fekitari uye vagadziri | Chuan Yang
Haining yanguan mutaundi epakutanga zvakadaro kwenguva refu kuti kambani!
Verenga August 18 kuyevedza kumiswa, kuravira Wang guowei aimbova dzokugara penyu, zvishoma fungidzira kuti pane chitoro chairemekedzwa, uyewo kubva ichi zvenhau netsika kuitika muguta rekare - yanguan.
Kana kukunetsa hamuzivi kuenda kunotenga pasofa, yanguan vanhu vachange nechido kusuma kwamuri "kuna chuan Yang ah chuan Yang pasofa kwemakore anopfuura 30, mutana muchiso.
Panguva iyoyowo, vachava nomufaro kukupa mirayiridzo "pamwe kumabvazuva nokumavirira avhenyu zvawave kumabvazuva, ona guo dian gasi chiteshi, chuan Yang musha uri pakatarisana ari gasi chechitima.
Achitaura chuan Yang mhuri, isu haining veko anenge tese, uyewo chinogona vanoverengerwa mhuri muchiso ~
"Kana murume wangu wokutanga takaroorana, takatenga kawaio kuti pasofa. Pava nemakore anodarika 10. Zvino isu hatina kunatsiridzwa musha wedu uye akaritenga kawaio kuti pasofa. "
Vanozopinda pamukova sichuan yomugungwa, mudonzvo rwunofarikaravo chaizvo, kukupa zvakawanda sumo, pasofa, mubhedha, dehwe, mucheka uri, huni yakasimba, European ... All siyana, regai iwe ikapenya ~
Uriri yokutanga American pasofa, uriri wokutanga matehwe pasofa nematehwe mubhedha, uye pasi wechipiri jira pasofa.
Chuanyang mhuri nedehwe dzakatevedzana 611-25
Chuanyang mhuri matehwe dzakatevedzana 611-25, pasofa ichi chakagadzirwa mvura kuchena, kusimbisa softness uye runako yacho pasofa. Tikafunga 3 vanhu + youmambo murongo chinokodzera pakusarudza svikiro uye duku nokugara mukamuri, mutsetse uri zvipfupi uye zvokutsetsenurwa, pasina wandisa.
Chuan Yang mhuri jira dzakatevedzana 616-25
Chuan Yang mhuri jira uri dzakatevedzana 616-25, pasofa ichi anosarudza waini tsvuku, rinowanika nechido, inoumbwa, kudhinda mutsago unondoregedza pasofa vanoti bhayibhayi kune monotonic, inowedzera kufema youth mushana. Sarudza yepamusoro donje nerineni akamendwa pasofa pakusarudza yepamusoro donje yerineni, vanopfeka nemishonga uye tsvina, donje nomucheka anogona zvinobudirira yekubata ziya paganda hwevanhu, kwezvakatipoteredza utano, hapana methanol.
Kana uine mwana, unogona zvakare kukwira pauriri rechitatu, kune marudzi ose Inn vana o! Kunewo huni Inn.
Pink, zvitema, mukomana muduku, kasikana vane ~ vane manyorero kuti mwana wako anoda?
Europe mhando Style
Kwira 4 mapuriro zvakare ndiye Europe mhando Suite, rakafara kwezvokufuka fenicha, machisi pamwe kusimba chivezwa, vane wakasvibirira, yakakwirira, inotapira kunzwa rudzi ~
Sichuan vatorwa mhuri
Zvayaiva pamahombekombe qiantang rwizi, zhejiang chuanyang midziyo co., LTD., Yakavambwa muna 1986, ane makore 30 okukura history, kushandisa pakutsvakurudza uye kukura, kugadzira uye rokutengesa ose chipanje zvinhu uye nyoro midziyo. Muna 2006, zvakanga akavamba zhejiang chuanyang fenicha co., LTD., Iyo yava hombe ano misoro mhuri zvebhizimisi kusanganisa design, kugadzira, rokutengesa uye basa. Kambani yakanga pamutemo dziri itsva bhodhi rechitatu musi May 11, 2016 pamwe Nehunde bumbiro 837386.
Location: no.12, huanyuan kumavirira mugwagwa, guodian maindasitiri park, yanguan guta (kwakatarisana guodian gasi chiteshi)
Contact nhamba: 0573 - 87683850
Post nguva: Jul-19-2019
Subscribe kuna Newsletter Our:
3 Seater Recliner Chair pasofa , Leather Recliner Chair pasofa, Sectional Leather Rocker Sofa, Sectional Recliner pasofa ,